(Dhagayso) War DAG-DAG AH: G/hore ee Baarlamaanka Puntland Siciid Xassan Shire oo hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Axmed Cali Xaashi. – Radio Daljir
(Dhagayso) War DAG-DAG AH: G/hore ee Baarlamaanka Puntland Siciid Xassan Shire oo hambalyo u diray guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Axmed Cali Xaashi.
Nofeembar 9, 2015 8:50 b 0
Garowe, 09, Nov, 2015 – Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka dawladda Puntland Siciid Xassan Shire oo waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa si diiran usoo dhaweeyay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland uu maantay yeeshay mudane Axmed Cali Xaashi.
Mudane Siciid waxaa uu tilmaamay inuu ka shaqayn-doono hormarka Puntland, waxaana uu sheegay Guddoomiyaha hadda la doortay inuusan dardaaran u baahnayn oo uu horay usoo noqday guddoomiyah baarlamaanka Puntland.
Mudane Siciid Xassan Shire waxaa uu ka gaabsaday inuu ka hadlay marxalada siyaasadeed ee ay Puntland waajahayso, waxaana uu hadalkiisa ku soo koobay hambalyada guddoomiyaha cusub.
Waxaa waraysigaan la yeeshay wariye Maxamed Cabdullaahi Cali \_’Kooshin\_’